Ungayisetha kanjani ibhizinisi lokugaya irayisi ePhilippines
Ilayisi bekulokhu kudla okuvela ekudleni kwasePhilippines kusukela ngesikhathi sokukhumbula,ukusetha ibhizinisi lokugaya irayisi ePhilippines kungaba ukuhamba okuhle. Ngabe ufuna ukwazi izinyathelo zokusetha ibhizinisi lokugaya irayisi ePhilippines? Njenganoma yiluphi olunye uhlobo lwebhizinisi lokufaka okusanhlamvu, kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu kwenzeke. Cala qala isitolo sokugaya irayisi ukucubungula i-paddy kumlimi noma wakhe isitshalo sokugaya irayisi ukuthengisa owakho umhlophe irayisi.Each inezinzuzo nezinzuzo ngakho kufanele ukala izinketho zakho ngokucophelela ngaphambi kokungena kulolu hlobo lwebhizinisi..
Uma kuqhathaniswa nokwakha isitshalo sokugaya irayisi ,kuzoba lula kakhulu ukwakha imboni yokugaya irayisi
1 Thola indawo enhle
Ukukhetha indawo enhle kuyisiqalo esibaluleke kakhulu sokuvula isitolo sokugaya irayisi
2.Thola amalayisense ezidingekayo nezimvume
Akunandaba noma hlobo luphi lwebhizinisi , ukuthola amalayisense nezimvume zebhizinisi kuyadingeka.
3.Thenga umshini wokugaya irayisi
Imishini emikhulu yesitolo sokugaya irayisi umshini wokugaya irayisi.
Amabhizinisi amancane asemaphandleni angabheka futhi umshini wokugaya ama-compact irayisi ongasebenza imisebenzi yamamodeli amakhulu. Lesi yisibonelo esingu-6LN15 esivela eChina .sinye isizathu esihle kakhulu esenza ukuthi kube yimali engenayo ukuthi isigayo sinayo isilinganiso sokutakula esiphakeme kakhulu 68.1 amaphesenti. Lokhu kusho ukuthi kukho konke 100 kilos of paddy milled, 68.1 kutholakala amakhilogwe elayisi abolile. Umshini wokugaya irayisi unomshini wokuhlanza ,khumbula umshini, irayisi isihlukanisi, umshini wokugaya irayisi,umshini we-grader welayisi. Irayisi eligayiwe ihlanzeke kakhulu.ingasetshenziswa yindoda eyodwa kuphela.
Umtshalizimali angafaka eyodwa emphakathini lapho abalimi abancane belayisi bekhiqiza khona izinto eziyinkimbinkimbi zokulungisa irayisi ezingeke zikukhathalele ukwamukela. abalimi abancane belayisi bangavuna isivuno sabo futhi bathengise okufanayo nelayisi elidayiswayo, bazokhulisa kakhulu imali abayitholayo. Abalimi abaningi bavuna 120 imigqa ye-palay kusuka ehektheleni elilodwa. Uma zithengisa i-palay ku-P17 ngekhilogremu ngayinye, imali engenayo izoba ngu-P102,000. Kepha uma isivuno sabo sigaywa yisitshalo se-6LN15 paddy rice mill, bazothola ingqikithi 3,900 kilos yelayisi ebunjiwe. Ngoba ilayisi selisezingeni eliphezulu, okuzothengiswa ngo-P42 ngekhilogremu ngayinye futhi inani eliphelele kuzoba ngu-P163,000. Izindleko zokugaya zingu-P7,800 kuphela ngakho-ke kukhona imali ekhuphukayo ka-P53,200 yabalimi abafake i-paddy yabo futhi bathengise okufana nelayisi lokuhweba.
Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi ungawuthengisa kanjani umkhiqizo wakho oyilayisi wephakethe?? kuyinkimbinkimbi kakhulu ukusetha isithombo sokugaya irayisi ePhilippines
1.Funda imininingwane eminingi ngebhizinisi lokugaya irayisi
Ngaphambi kokungena shí ebhizinisini lokugaya irayisi, kubalulekile ukuthi uthole noma imuphi ummbila welayisi okuzungezile; bheka imvelo, ube nomuzwa wezinqubo ezithintekayo ekugayeni irayisi futhi uhlangane nomnikazi noma umphathi. Bazise ukuthi uhlela nokuqala ibhizinisi futhi uzodinga ukuqeqeshwa okuthile. Kufanele futhi uthole izindleko zokuqala ibhizinisi kanye nezindleko zokuqhuba ibhizinisi ngemuva kokwethulwa. Thola imishini namandla. Thola ngezingqinamba nezinselelo abantu abasha abangenela ibhizinisi abangabhekana nazo kakhulu. Futhi uthole ukuthi ungakugwema kanjani izingibe futhi unqobe izinselelo.
2.Dala uhlelo lwebhizinisi
Ukwakha uhlelo lwebhizinisi lakho lokugaya irayisi kubaluleke kakhulu, ngoba izokuqondisa kwinqubo yokuqala ibhizinisi futhi uyiqhube ngempumelelo emva kwalokho. Uhlelo lwakho lwebhizinisi luzophinda luhlanganyele lapho ukhuluma nabatshalizimali noma ababolekisi ukuxhasa ibhizinisi lakho.Icebo lakho lebhizinisi lizocacisa izinhloso nezinjongo zebhizinisi lakho, okudingekayo kokuqalisa nezindleko zokuqalisa, imali etholakele eminyakeni embalwa edlule, abasebenzi abadingekayo, imakethe yakho eqondiwe kanye nokuhlaziywa okuphelele kwaleyo makethe, umncintiswano, Isu lakho lokukhangisa nendawo ehlukile yokuthengisa, necebo lakho lokuphuma.isinyathelo esibalulekile sokusetha ibhizinisi lokugaya irayisi ePhilippines.
3.Thola amalayisense ezidingekayo nezimvume
Cishe kuzo zonke izingxenye zomhlaba, Ukuthola amalayisense nezimvume zebhizinisi kuyisidingo sokuqala noma yiliphi ibhizinisi. Noma kunjalo, amalayisense adingekayo nezimvume ziyehluka phakathi kwezwe namazwe. Ngakho-ke, kungcono ukuthi uvakashele i-ejensi efanelekile esifundazweni sakho noma ezweni lakho ukubuza ngamalayisense nezimvume ozodinga ukuzithola ngaphambi kokuqala ibhizinisi lakho lokugaya irayisi.. Kungcono nokho, vakashela iwebhusayithi ye-ejensi noma thintana nommeli obenamava ukuthola.
4.Thola indawo enhle
Indawo enhle ingumhlubuki wempumelelo yanoma yiliphi ibhizinisi. Indawo ekahle yebhizinisi lakho lokugaya irayisi yilelo elihlangana kalula emalolini nakwezinye izimoto, ngoba lawa azosetshenziselwa ukuthutha ilayisi ukuya nokubuya kumila yakho.Ngaphezu kwalokho, lapho ukhetha indawo yebhizinisi lakho lokugaya irayisi, kufanele ufake isandla ekutholakaleni kukagesi nezinye izinsiza ozozidinga ekusebenzeni kwebhizinisi lakho nsuku zonke.
Imishini enkulu ebhizinisini lokugaya irayisi isitshalo sokugaya irayisi. Lo mshini ubeka ngobunono i-de-husks irayisi eluhlaza ukukhiqiza irayisi ngohlobo lwayo oluhlelekile.Isitshalo sokugaya irayisi ongasingenisa sisuka emazweni afana neChina, lapho imishini ijwayele ukwenziwa futhi ithengiswe ngamanani ancishisiwe.
6.Qasha abasebenzi bese uqala imisebenzi
Uzodinga ukuqasha abanye abantu ukuthi basebenzisane nawe. Ngokwesibonelo, uzodinga izisebenzi ezizolayisha abasebenzi abasebenza izitshalo zelayisi ezingavuthiwe nezomila, kuya ngesilinganiso semishini emshinini wakho wokugaya irayisi.
Xhumana Nathi Ngokumisa ibhizinisi lokugaya irayisi ePhilippines